Windows | ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲချုံ့ခြင်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 21/09/2021 12:09 | အင်တာနက်ကို
တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ လိုက်၍ အဆုံးမသတ် ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲချုံ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများတွင်နေရာပိုရရန်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလျှောက်ထားခြင်းသည်ဖိုင်၏အကြောင်းအရာနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုမထိခိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပေးအယူမရှိဘူး၊ သူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာကရိုးရှင်းပါတယ်။
ဒါကငါတို့ဒီ post မှာဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ပဲ။ ဤစစ်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောအားသာချက်များကိုခံစားပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကိုမစခင် ၎င်းသည်ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲချုံ့ရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်သင့်တော်သလားဆိုသည်ကိုတွေးပါ ငါတို့ရဲ့ disk drive ပေါ်မှာ
2 NTFS ဖိုင်ချုံ့
3 ဖိုင်ချုံ့ခြင်းကိုပိတ်ရန် Group Policy Editor ကိုသုံးပါ
တစ်ခုရှိတယ် နေရာသက်သာရန်လိုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင် သို့ဆိုလျှင်အကြီးဆုံးဖိုင်များ (သို့) ပထမဆုံးသုံးခဲသောဖိုင်များကိုချုံ့ရန်အကြံပြုသည်။
လုပ်စရာရှိတာလုပ် ဖိုင်များစွာကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပါမရ။ အလွန်ကြီးသောဖိုင်များကို တင်၍ မရပါ။
ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲနှစ်ခုလုံးကိုချုံ့နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးကိစ္စတွင်ချုံ့ခြင်းကို၎င်းတို့ပါ ၀ င်သောဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများအားလုံးသို့တူညီစွာအသုံးချသည်။
သင်တစ် ဦး ချုံ့သောအခါ ဖိုငျတှဲချုံ့ထားသောဖိုင်တွဲအသစ် (.zip, .rar (သို့) အခြား extension တစ်ခုပါရှိနိုင်သည်) သည်မူလ folder နှင့်တူညီသောနေရာတွင်အလိုအလျောက်ပေါ်လာသည်။ ဤဖိုင်နှစ်ခု၊ မူရင်းဖိုင်နှင့်ချုံ့ထားသောဖိုင်နှစ်ဖိုင်သည်လုံးဝလွတ်လပ်သည်။
သို့သော်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် ဖိုင်အားလုံးကိုတူညီတဲ့အဆင့်ထိချုံ့မထားပါမရ။ အမှန်မှာ၊ ၎င်း၏အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်၍ ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်ကွဲပြားသော "ဒီဂရီ" များရှိသည်။ ဥပမာ - စာသားဖိုင်များကိုပုံများထက်အများကြီးပိုချုံ့သည်။
ငါတို့က Windows operating system နဲ့အလုပ်လုပ်ရင်၊ ဖိုင်စနစ်ကဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုရှိတယ် နည်းပညာဖိုင်စနစ်သစ် NTFS)
Windows 10 တွင်ဤစနစ်သည်aပါ ၀ င်သည် ပေါ့ပါးသော compression function ဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဒီ function ရဲ့အားသာချက်ကကွန်ပျူတာမှာနေရာအများကြီးကိုချွေတာတာအပြင် manual decompression ကိုသုံးစရာမလိုဘဲဖိုင်တွေကိုသုံးခွင့်ပေးတယ်။
အ အားသာချက် NTFS compression ၏များစွာသည်အလွန်သိသာထင်ရှားသည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့၎င်းသည်အာကာသနေရာလွတ်ရန်ထိရောက်သောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲသောဖိုင်များကိုသိုလှောင်ရန်ယူနစ်တစ်ခုစီစဉ်သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အရာအားလုံးရှိနေသော်လည်းအချို့လည်းရှိသည် အဆင်မပြေမရ။ NTFS ချုံ့ခြင်းကိုဖွင့်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၎င်းတို့သုံးသည့်အခါတိုင်းချုံ့ပြီးတစ်ဖန်ပြန်လည်ချုံ့သောကြောင့်၎င်းသည်အခြားအရာတို့တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရင်းအမြစ်သုံးစွဲသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုချုံ့ရန်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် Windows ကို 10 ကိုသုံးသည် ဖိုင် Browserမရ။ ချုံ့ခြင်းကိုတစ် ဦး ချင်းဖိုင်များ၊ ဖိုင်တွဲများနှင့် drive တစ်ခုလုံးတွင်ပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်မြန်ပြီးဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းလုပ်ချင်တဲ့ဖိုင်တွဲ (သို့) ဖိုင်ပေါ်မှာညာကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့၏ option ကိုရွေးပါ « Properties ».
tab မှာရှိတယ် "အထွေထွေ", ငါတို့ရွေးချယ်ပါ "အဆင့်မြင့်" အဆင့်မြင့်အရည်အချင်းများကိုရယူရန်
ဒါကအရေးကြီးတဲ့အဆင့်ပါ "ချုံ့ရန်" သို့မဟုတ် "ဂုဏ်သတ္တိများကိုအသွင်ဝှက်ပါ" ငါတို့သည်၏ option ကိုအမှတ်အသား "disk space ကိုချွေတာရန်အကြောင်းအရာကိုချုံ့ပါ".
အတည်ပြုရန်နှိပ်ပါ "ရလား" ပြီးတော့ "လျှောက်ထား" ။
ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲချုံ့ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ command prompt မှတဆင့် command ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည် ကျစ်လစ်သောမရ။ ဒီမှာအဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ချုံ့ချင်သောဖိုင်တွဲသို့နှိပ်ပါ Shift + Control + Right Button၏ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ရန် "ဒီမှာ command window ဖွင့်ပါ".
ငါတို့လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ command ကိုငါတို့ထည့်တယ်။
ဖိုင်တစ်ခုတည်းကိုချုံ့ရန်ဖိုင်အမည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်း / c
၎င်းအစားကျွန်ုပ်တို့သုံးသောဖိုင်တွဲရှိဖိုင်အားလုံးကိုချုံ့ရန် filename ကျစ်လစ်သိပ်သည်း / c *
ဖိုင်တွဲတစ်ခုနှင့်ဖိုင်တွဲခွဲများကိုချုံ့ရန်ဖိုင်အမည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်း / c / s
ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်၊ Windows ၌ဖိုင်ချုံ့ခြင်းကိုပိတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖွင့်ရန်အတွက်တူညီသောအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကမှတ်သားထားသောရွေးချယ်မှုကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။
တစ်ဖန်ငါတို့သည်ငါတို့လုပ်ဆောင်လိုသောဖိုင်တွဲ (သို့) ဖိုင်ပေါ်တွင်ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်ငါတို့သည်၏ရွေးချယ်မှုကိုသွားပါ « Properties ».
ကျွန်ုပ်တို့ tab ကိုရှာသည် "အထွေထွေ"ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအရာ "အဆင့်မြင့်" အဆင့်မြင့်အရည်အချင်းများကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်
ခြားနားချက်သည်ဤအဆင့်တွင်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သောအခါ "ချုံ့ရန်" သို့မဟုတ် "ဂုဏ်သတ္တိများကိုအသွင်ဝှက်ပါ" ငါတို့သည်၏ option ကို uncheck လုပ်ပါ "disk space ကိုချွေတာရန်အကြောင်းအရာကိုချုံ့ပါ".
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး စွာနှိပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတည်ပြုပေးလိမ့်မည် "ရလား" ပြီးတော့ "လျှောက်ထား" ။
ဒါတွေကတော့ NTFS compression and decompression feature ကိုသုံးပြီးလိုက်နာရမယ့်နည်းလမ်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးတွေကိုပိုပြီးတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့နောက်ထပ် tool တစ်ခုရှိသေးတယ်။
ဖိုင်ချုံ့ခြင်းကိုပိတ်ရန် Group Policy Editor ကိုသုံးပါ
ငါတို့လိုချင်တာက Windows 10 ကိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲငါတို့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖိုင်တွေကိုချုံ့တာကိုကာကွယ်ဖို့ပါ။ ဒါက NTFS ဖိုင်တွေကိုချုံ့တာကိုပိတ်တာဘဲ။ အုပ်စုမူဝါဒအယ်ဒီတာ
၎င်းသည် Microsoft ၏လည်ပတ်မှုစနစ်များရှိပြည်တွင်းရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအယ်ဒီတာကကျွန်ုပ်တို့အားလေ့ကျင့်ရန်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Control Panel တွင်သို့မဟုတ် General System Settings တွင်မရနိုင်သောအချို့သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
Group Policy Editor နှင့် NTFS file compression ကိုပိတ်ရန်လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့သော့ကိုနှိပ်ပါ Windows ကို + R ကို ဖွင့်ရန် dialog box ကို run ပါ.
အကွက်ထဲမှာငါတို့ရေးမယ် MSc ကိုနှိပ်ပါ « Enter ».
တစ်ခါက အုပ်စုမူဝါဒအယ်ဒီတာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ option လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်သည်။ Computer Configuration> Administrative Templates> System> File System> NTFS သို့သွားပါ။
အောက်တွင်ဖွင့်ထားသောရွေးစရာများမှကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် "NTFS အတွဲများအားလုံးကိုချုံ့ရန်ခွင့်မပြုပါ"မရ။ အဲဒီမှာငါတို့ကလစ်တယ် "ဖွင့်ထားသည်" ခလုတ်နှင့်အတည်ပြုပါ "လျှောက်ထား" ။
ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်၊ ချုံ့ခြင်းကိုဖွင့်ပါ၊ ဤတူညီသောအဆင့်များအတိုင်းလိုက်ရုံနှင့်အဆင့်နံပါတ် ၄ တွင် "ဖွင့်ထား" ကိုရွေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » Windows တွင်ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲချုံ့ခြင်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း